ओली भर्सेस प्रचण्ड-माधवको दोहोरी ब्याटल, दर्शक दीर्घामा देउवा-पौडेल जुहारी (भिडियो रिपोर्ट) – Nepal Press
प्रतिनिधिसभा विघटनको १ महिना
ओलीको रेस्लिङमा प्रचण्ड-माधव भाग नलिने
२०७७ माघ ५ गते ८:३५
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा अब अदालतबाट पुनःस्थापित हुने कि ताजा जनादेशबाट आउने ? यही बहसमा छ अहिले मुलुक ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको यो एक महिनाबीचको सबैभन्दा ठूलो घटनाक्रम भनेको सत्तारुढ नेकपाको विभाजन नै हो । यद्यपी कानुनी रुपमा नेकपा विभाजनले मान्यता पाइसकेको छैन । तर राजनीतिक रुपमा यो एक महिनामा दुवै पक्षका आक्रामक आरोपले भने दोहोरी ब्याटललाई बिर्साएका छन् ।
ओली र प्रचण्ड माधव पक्षको दोहोरी ब्याटल हेरेर आम नागरिकले कस्तो मूल्यांकन गर्दैछन् ? निर्णायक मण्डलमा बसेका जनताले दिने फैसला त आवधिक निर्वाचनबाटै आउनेछ । तर नेकपाका नेताहरुको जुहारीले मान्छेलाई निःशुल्क मनोरन्जन दिएको छ ।
प्रचण्डले बारम्बार भन्न थालेका छन्–हामी मातम (शोक) मनाइरहेका बेला केपी ओली मान्छे हसाएर हिडेका छन् । उनलार्ई मुस्काउँदै हिडेका छन्, सामान्य मान्छेले यसरी कमेडी गर्न सक्दैन ।
ओली पनि के कम, उनले प्रचण्डलाई शनिवार तीनकुनेको रोयल बैंक्वेटबाट जवाफ दिए– ‘मान्छे मारेर, लुटेर, काटेर रुवाउनेलाई मैले हसाएको मन परेन होला । हामी किन नहास्ने ? चुनाव हुँदैछ, हामी जित्दैछौं, हामी हास्छौं ।’
पुस १४ गते प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले ओलीविरुद्धको दोस्रो आन्दोलन गरेका थिए । जहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अश्लिल नाराबाजी भयो ।
त्यसको जवाफ केपी ओलीले भाेलिपल्टै कार्की पार्टी प्यालेसबाट दिए ।
प्रचण्ड-माधवले पुस १४ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुन्छ हामी जीवितै छौं भन्दै केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनावलाई खारेज गर्ने भने ।
यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले पुष २६ गतेको राष्ट्रिय सभाबाट यसरी फर्काए– निर्वाचनको मैदान घोषणा गरिएको छ, रेसलिङ खेल्न आउनुहोस् । रिङ तयार भएको छ । आउनुहोस् खुट्टा कमाउनु पर्दैन जितेर बेल्ट लानुहोस् । खुट्टा किन कामेको ? निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सातो किन गएको ?
प्रचण्डले वैशाखपछि ओली प्रधानमन्त्री रहँदैनन् र उनको पत्तासाफ हुन्छ भने । उनले ओलीले संविधानको बलात्कार गरेको आरोप लगाए ।
यसको जवाफमा ओलीले भने- ‘छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्र धुजा-धुजा बनाएको भन्दै पत्तासाफ कसको हुन्छ चुनावमा आउन चुनौति दिए । तर मतपत्र च्यात्न पाइँदैन ।’
यो एक महिनाको अर्को रोचक दोहोरी ब्याटल चाहिँ केपी ओली र माधव नेपालको क्यारिकेचरवाला सवाल-जवाफको हो ।
अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट अपमान भोग्नुपरेको बताए । उनले ओली नसुध्रिने मान्छे भएको टिप्पणी पनि गरे ।
जवाफ फर्काउँदै ओलीले भने- ‘माधव नेपालको बारेमा मैले कुनै टिप्पणीनै गर्नु छैन, उनी प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हुन् । मसँग हाताहाती चाहियो भन्दै थिए प्रचण्डको द्वितीय उपाध्यक्ष हुन गएछन् ।
दर्शक दीर्घाबाट देउवा–पौडेल जुहारी
प्रतिनिधिसभा विघटनको यो एक महिनामा सबैभन्दा रोचक जुहारी नेकपाकै नेताहरुबीच चल्यो । तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका दुई मुख्य नेता शेरवहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले पनि दोहोरी ब्याटलमा भाग लिए ।
देउवाले बुढानिलकण्ठको कार्यक्रमबाट भने- ‘ओली चुनाव प्रचारमा लागि सके, हामी चुनावबाट भाग्ने कुरा हुन्छ ? चुनाव भयो भने चुनावमा जानुपर्छ ।’
जवाफमा भरतपुरबाट रामचन्द्र पौडेल बोले- ‘के को चुनाव ? हाम्रो सभापतिजीको तालुमा आलु फल्दैछ तर उहाँले किन नबुझेर चुनाव-चुनाव भनेको ?’
#ओली भर्सेस प्रचण्ड
#देउवा भर्सेस रामचन्द्र
प्रकाशित: २०७७ माघ ५ गते ८:३५